Indlela yokugcina indlu ihlanzekile?
Gcina indlu ihlanzekile akuyona enzima njengoba kubonakala. Amathiphu ethu obuhle azokusiza ukuwahlanza nokuwagcina ezindaweni ezintathu ezinzima kakhulu zendlu yakho.
Lapho izinto zihlakazeka yonke indawo, inkosikazi yakhe ayizwa indlela engcono kakhulu: ukukhathazeka okuncane, ukukhungatheka, futhi ngezinye izikhathi njengecala. Izigqoko zokugqoka eziyingxubevange, isigamu sezingubo ongasagqoki, abadwebi betafula abathwe ngezinto ezingadingekile - lezi yizindawo lapho ngokuvamile kudla khona.
Ngokuqinisekile uye wenza ukuhlanza kuzo izikhathi eziningi, kodwa ngaso sonke isikhathi yonke into yayihlanganisiwe futhi. Isizathu sisezinkambu zengqondo. Kuvela ukuthi sihlobene ngokomzwelo nezinto eziningi zethu. Isibonelo, siyaxolisa ukuthengisa noma ukulahla isifuba se-antique, esake saba ngugogo wethu. Kodwa ilungiswa. Sithole izindawo ezingu-3 eziyinhloko, lapho ngokuvamile kuvame ukungcola khona. Laba abadwebi bama-lockers kanye netafula lokugqoka, ideski kanye ne-wardrobe. Uhlelo lwethu oluhlelwe luzosiza ekuqedeni ukungcola kanye nhlobo.
Uma wena, njengabantu abaningi, ungagqoki isigamu sezingubo, kusuka ekamelweni lakho, ungafaka izinto ezingadingekile kwi-pantry. Izinto ezonakaliswe kabi noma ezivela emfashini kufanele ziphonswe kude. Ngezinye izikhathi kunzima, ngoba eziningi zazo zisikhumbuza ngezikhathi ezahlukene zokuphila kwethu - kokubili okuhle nokubi. Cabanga ukuthi yiziphi izingubo ezikugqugquzela ukuhola impilo esebenzayo, ukudlala ezemidlalo noma ucabange ngempilo, futhi yikuphi okukukhombisa futhi ukuthi ukhuluphele kakhulu. Kunconywa ukuthi ususe lo mkhakha wokugcina.
1. Gqoka izingubo ezihlukile kanye nezesekeli ongazange uzigqoke unyaka. Izinto ezigugile kakhulu nezindala ziphosa ngokushesha.
2. Zama ukuhlola ikhabethe lakho ngokulinganisela. Ngenxa yalokhu, mbuke ngokujulile noma ubuze umbono womngane noma intombi eseduze. Yini, ngokubona kwabo, izinto kufanele zilahlwe kude isikhathi eside. Kodwa cela kuphela lowo muntu ozokutshela iqiniso, hhayi lokho ongathanda ukukuzwa.
3. Khipha izingubo ezingakukhuthazi. Isibonelo, uma uphupha ukulahlekelwa isisindo futhi usuvele ulahlile amakhilogremu ambalwa, khona-ke uphonsa noma unike umuntu okuthile usayizi omkhulu.
4. Hlunga izingubo ongazigqoki, ebhokisini bese ubhalisa ngamunye wabo. Isibonelo: "Izingubo zehhovisi." Khona-ke, uma kungakapheli unyaka ungasebenzisi noma yiziphi izinto ezivela kuleli bhokisi, ulilahle.
1. Ungakhohlwa ngama-aesthetics. Uma iKhabhinethi yakho ibukeka ilungile, khona-ke uzofuna ukuyigcina kulo mbuso. Ngezingubo, sebenzisa ama-hangers ezenziwe ngamapulangwe noma epulasitiki, kusuka kuma-hangers ama-wire kufanele alahlekelwe, ngoba angaboni ubuhle kakhulu futhi ngezinye izikhathi angabamba izingubo.
2. Hlela izingubo (isibonelo, ngombala noma ngohlobo). Roll bese uhlanganisa ndawonye jeans kanye sweaters. Kungcono uma uvala abadwebi bekhamera ngendlela yokuthi izingubo ezikuzo zibonakala. Unganyatheli amabhokisi, kufanele kube khona isikhala kuwo.
3. Ungagcini izinto ebhokisini. Izicathulo nezimpahla zesikhumba emashalofini. Izikhwama namabhande asezingeni leso, ukuze zithathwe kalula.
4. Ngaphambi kokuthenga izinto ezintsha, susa abadala.
Uma unomuzwa wokuthi awukwazi ukuhlela futhi uphumele ngokoqobo, qaphela ithebula lakho. Ngokuqinisekile nje kubonisa lesi simo sakho. Igcwele izincwadi, amaphephandaba namamagazini. Kubonakala sengathi uma unesikhathi, ungabuka futhi ufunde konke lokhu. Kodwa lo mzuzwana awufiki, futhi intaba yezinto ezingadingekile etafuleni iyanda.
1. Yenza wonke amaphepha etafuleni lakho, uwahlukanise ngezigaba ezintathu. Esigodini sokuqala, engeza izinto ezidinga ukunakwa ngokushesha. Igoli lesibili yilokho akubalulekile kakhulu. Futhi okwesithathu - lawo maphepha awudingi esikhathini esizayo esiseduze.
2. Beka wonke iphepha elidingekayo ukuze ibhizinisi lifinyelele esandleni. Zenze ziqonde ezimweni ezikhethekile ngezinhlamvu ukuze zingcwatshwe ngaphansi kwamaphepha amaningi etafuleni. Uma uhlola amaphepha, zithembele wena - akekho owazi okubalulekile noma okungcono kunakho.
3. Thatha indawo ehlukile yokugcina isikhathi eside. Faka phakathi okuthile okungeke kube usizo esikhathini esizayo esiseduze, kodwa ngesizathu esithile awukwazi ukuwuphonsa. Kuhle ukugcina amaphepha afanele amafayili akhethekile namafolda, kanye nama-rack afakwe eludongeni.
1. Thenga ithebula elenziwe ngezinto zokwakheka kwemvelo. Kumele kube ngamabhokisi, lapho ungahlanza izinto ukuze zingabonakali.
Ngakho-ke, igumbi lizobe lincane kakhulu. Hlela amafayela ngamaphepha bese ubhalisa. Isibonelo: "Izindawo engingathanda ukuzovakashela," noma "I-Catalogs ngezingubo," njll Hlunga wonke amaphepha ngokusho ngokwezigaba zawo.
2. Engeza wonke ama-imeyili kanye nezikweletu ezihlukile, ukuze zingalahlekelwa ngengozi.
3. Gcina zonke izinqolobane ezingaphezu kwamasonto amabili, bese uziguqula ezisha.
4. Khetha amashalofu avela ezintweni eziphathekayo. Zibambe kakhulu kangangokuthi izingane zakho azifinyelelanga amaphepha abalulekile.
I-arsenal yakho yamasu
Okudingayo ukuthenga ukunqoba lesi sifo kwakungenalo igazi futhi kulula futhi kwaletha ngisho nokuthakazelisa!
1. Ibhokisi elingafani leKhabhinethi, amabhokisi avulekile okugcina izicathulo. Lokhu kuzokuvumela ukuba ungakhohlwa mayelana nezingubo, izicathulo nezesekeli ozibekayo ukuze uzigcine isikhathi eside.
2. Ama-Hanger noma amapulasitiki epulasitiki.
3. Izimo ezibonakalayo zamafayela namaphepha. Zizosiza ukuhlunga izincwadi zakho kanye namanye amaphepha.
4. Itafula elinomdwebo opaque, ngenxa yokuthi igumbi lakho lizobukeka lihle kakhulu.
5. Amashalofu emabhuku asetshenziselwa izinto eziphathelene nemvelo.
6. Amabhokisi amancane namabhokisi okugcina izinto ezincane.
Kuzo zonke izindlu kunamabhokisi wezinto ezihlukahlukene, kanti ingozi enkulu ukuthi yonke into ilahliwe kubo: kusuka kumaphepha abalulekile kuya emaphepheni wephephandaba kanye namapenki aphukile. Lokhu kuvame ukukwenzeka ngoba siphuthuma isikhathi esiningi futhi asinaso isikhathi sokucabanga ngezinto ezibalulekile nokuthi yikuphi udoti. Ukuze wenze amabhokisi endlini yakho aguqulwe, kufanele uhlale ukhumbule ngalokhu kukhishwa kanye nenothi ukuthi yiziphi izinto ezifanelwe indawo endlini yakho, futhi okungenjalo.
1. Thatha isikhathi sokubeka konke ngokuhlelekile. Pheqa amaminithi angu-20, ungasaphinde, ukuhlunga zonke izinto. Ungasebenzisa ngisho ne-timer ukugxila ngangokunokwenzeka futhi ungaphazanyiswa ezinye izinto.
2. Hlanganisa ibhokisi. Lahla konke okuqukethwe kwalo endaweni ehlanzekile. Kufanele kube mkhulu ngokwanele ukukuvumela ukuba ubone zonke izinto.
3. Beka eceleni zonke izikweletu kanye namanye amaphepha abalulekile. Khetha ibhokisi elihlukile kubo.
4. Thenga amabhokisi engeziwe ukuze ugcine izinto ezincane ezincane ebhokisini lakho. Hlunga izinto ngohlobo. Isibonelo, i-gom, amakhadi eklabhu namabhethri, ufake amabhokisi amathathu ahlukene.
1. Ungabeki izimali nezindleko ebhokisini enezinto ezihlukahlukene.
2. Qiniseka ukuthi zonke izinto zikhona ebhokisini labo. Nika usuku lonke izinsuku ezingu-5-10, ukuze konke kulungiselelwe.
3. Ungabhokisi amabhokisi - gcina ithrekhi yezinto ongazisebenzisi, bese uzilahla. Qaphela ukuthi amabhokisi awafaki ngaphezulu.
Owesifazane ohlangothini lomsebenzi wasekhaya ngokuqinisekile unguGeneralissi njalo. Kodwa umlawuli ngamunye wezinsizwa wayeneqhinga lakhe lokuthola ukunqoba. Uhlobo luni?
Ugcina ama-knickknacks angakhohlwayo kanye nezipho (isibonelo, iwashi eliphukile elinikezwa umama wakho iminyaka engu-6 edlule). Ubavikela ngisho noma ungawasebenzisi, futhi uzizwa unecala uma ufuna ukuwaqeda. Ngaphambi kokuqala ukuhlanza, khumbula: uma wanikezwa isipho, khona-ke wena kuphela unquma ukuthi ungayibhekana kanjani nayo. Khetha into eyodwa ehlobene nezihlobo zakho ngayinye bese uyigcina, faka konke okusebhokisini elihlukile bese ulihlanza endaweni ethile. Lokhu kuzokwenza uqaphele ukuthi ungakwazi ukwenza ngaphandle kwalezi zinto. Bese usakaza lezi zinto noma, uma zisesimweni esibi kakhulu, vele uzilahle.
Uyakhathazeka ngokukhethekile futhi ugcine izinto ezinjengama-napkins angasetshenzisiwe nezinketho zaseChina. Futhi uma ungasakwazi ukusebenzisa lezi zinto ngenjongo ehlosiwe, ufika nesicelo esisha kubo. Zenzele ubuhlobo obucacile nento ngayinye. Ingabe kufanele ngempela ukuthatha isikhala ekhaya lakho?
Uyakhumbula ukuthi ikhakethi oyithenge eminyakeni emihlanu eyedlule ayisakaze isetshenziswe futhi ithulile eshalofini? Abacabangi basithathu bathanda izinto ezinhle, izinto zobuciko. Benawo endlini yabo baqoqa izinto ezihlukahlukene zobuciko, ukusika okungavamile kanye nezinsimbi zomculo ezigcwala emashalofini. Abacabangi ukuthi kunesikhathi esanele salokhu, ngakho bathenga zonke izinto abazithandayo. Uma wazi ngokwakho, ke ngaphambi kokwenza enye ukuthenga, cabanga ngakho - futhi izofika ngokusebenzayo? Futhi ungakhohlwa ukulahla izinto ongazange uzijabulele okungaphezu konyaka.
Iseluleko esiwusizo ekwenzeni kwezomnotho ekhaya
Ukuzenzela, ilineni lokulala
Yini ongayinika uSonto ka-Valentine kumkakhe? Iseluleko esingavamile nezipho
Impahla yasendlini yokuhlanza indlu
Umsebenzi - umama wendlu
Ukwamukela iRoyal: isitayela saseMpumalanga - ukuthambekela kwekwindla-2016
Usizi nosizi lwesisu phakathi kwabesifazane abakhulelwe
U-Rihanna ukopisha isitayela se-Ksenia Sobchak, isithombe
Phuma ezindaweni zokubhuka ze-ski ze-Austria
I-Horoscope yamawele azalwa ngonyaka we-tiger ngo-2010
Izitayela ezidumile zase-Italy
Kuzoze kube nini ukugcina izimbali ku-vase
UDaria Pynzar ngeke ahlukanise nomyeni wakhe